DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida iyo CC Geeddi.
Boosaaso, Mar 27 2017--Kulan wanaagsna kusoo dhowaada barnaamijkii subaxnimo ee Saaka iyo Dunida, waxaana barnaamijka saaka xarunta Daljir ee Magaalada Boosaaso kasoo jeedinaya Cabdifatax Cumar Geeddi.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Wariye Cabdifataax Cumar Geeddi.
Bossaso, Mar 26 2017- Kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada dhegaysiga Barnaamijka cawaysnimo ee Caawa iyo Daljir, oo caawa idinka imaanaya istuudyaha Daljir ee Bossaso, waxaana soo jeedinaya Wariye Cabdifata...
Sawirro-Xeerka carruurta dayacan ee Puntland oo Garoowe laga daahfuray.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 26 March 2017 Magaalada Garoowe ku daahfuray siyaasada daryeelka dadban ee caruurta dayacan ee ku dhaqan gobolada Puntland.
MAQAAL-Sideed arrimood oo barlamaanka Soomaaliya ku diidan yihiin wasiirada cusub.
Xildhibaanno 105 ah oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sabtidii cabasho ka gudbiyay xukuumadda ra’isul wasaare Xasan Khayre, kooxdan oo diidan qaab dhismeedka xukuumadda la magacaabay ayaa mooshin u gudbiyay guddoomiyaha...
Gudoomiyaha barlamaanka Galmudug oo farriin u diray RW Khayre.
Gudoomiyaha Barlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa ka jawaabay dalabkii Ra’iisul wasaaraha ee ku aadana in dib loo dhigo doorashada Madaxweynaha Galmudug.
DHEGEYSO-Barnaamijkii ciyaaraha Daljir ee Sports News.
Boosaaso, Mar 26 2017-Kulan wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha ee Sports News, waxaana xarunta Daljir ee Boosaaso ka soo jeedinaya Mustafe Yare.
Jawaari oo RW Khayre u gudbiyey 110 xildhibaan oo ka horyimid xukuumadda cusub.
Qoraalka uu u direy guddoomiyaha baarlamaanka ra’iisal wasaare Kheyre oo nuqul ka mid ah soo gaaray Warbaahinta ayaa waxaa ku lifaaqan qoraal ay 104 xildhibaan u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka kuwaasoo ku dhaliilay ra’...
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida iyo Jamaal Farax Aadan.
Galkacyo, Mar 26 2017-Subax wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii subaxnimo ee Saaka iyo Dunida, waxaana xarunta Daljir ee magaalada Galkacyo kasoo jeedinaya Jamaal Faarax Aadan.
Galkacyo, Mar 26 2017-Kulan wanaagsan kusoo dhowaada Barnaamijkii cawaysnimo ee Caawa iyo Daljir, waxaana xarunta Galkacyo kasoo jeedinaya Jamaal Faarax Aadan.rnrn
DHEGEYSO-Culimaa'udiinka Ahlusuna ee gobolka Mudug oo dallad samaystay.
Garoowe, Mar 25 2017-Culimaa’udiinka Ahlusuna ayaa samaystay dallad ay ku midaysan yihiin, taasi oo ka shaqayn doonta arrimaha horumarinta diinta Islaamka iyo bulshada, warbixin arrinkaasi ku saabsan oo uu diyaaariyey Ja...